ngokugadwa Lomshushisi phezu ukuqaliswa kwemithetho kuyinto umsebenzi othize. It wenziwa ihhovisi federal lomshushisi egameni Russian Federation. ngokugadwa Prosecutorial kuyinto ukuqinisekisa ukunemba kuhambisana imithetho sisebenza endaweni isiRashiya, futhi ukubulawa soMthethosisekelo.
Lomsebenti ungumsebenti lobalulekile uhlobo esizimele ekumelaneni nombuso. Wakhe ngaphandle icala, iyiphi enye social, umphakathi, amateur noma kweminye imizimba, izikhungo, izinhlangano, abantu, izinhlangano, izikhulu, njll baphathe angenalungelo lokukuthola.
Incazelo ukubaluleka isikhundla ukuthi aqondiswa yileli lomshushisi Kwenziwa egameni Russian Federation, waphetha ngokuthi sihlola ngokuzenzakalela umshushisi uvikela izintshisekelo hhayi zemizimba ahlukene izikhonzi umfelandawonye, uhulumeni wasekhaya noma eminye esiphezulu, yokushaya imithetho noma igunya zokwahlulela. Umsebenzi kulokhu ethulwa egameni yonke imikhakha ngenhla futhi izakhiwo ndawonye, bahlanganiswe uhlelo ezivamile uhulumeni.
Izinhloso, ubunjalo kanye nezimiso lokugada prosecutorial
Ukuba khona lolu hlobo yokuzimela kusuka ukubaluleka imisebenzi isimo, ngokungafani nezinye izinhlobo imisebenzi, kokubili umshushisi nezinye iziphathimandla, amelwe okuqukethwe. Siqukethe hhayi kuphela ngokuqinisekisa ukunemba, ingaphansi kwemithetho kanye noMthethosisekelo we-Russia, kodwa futhi ngokomlayo nezinye izenzo zomthetho, kanye izinyathelo ukubhekana ubugebengu siyachazwa.
ngokugadwa lomshushisi, njengoba umsebenzi othize awusebenzi izenzo noma igatsha omunye uhulumeni (izinkantolo, abasemagunyeni esiphezulu, omele), ukuba, ngesikhathi esifanayo, izibonakaliso ngamunye wabo.
Abashushisi babe yindawo ekhethekile isakhiwo isimo Russian. Sinenkosi ubuhlobo ukusebenza Russian uMthethosisekelo wanakekela amagatsha kahulumeni. Ayisebenzi ngokuphelele noma yisiphi sazo, aqondiswa yileli lomshushisi ebavumela ukulingana, ukuqinisekisa ukusebenza elilungile.
Lapho sicabangela uhlobo uhlobo ngenhla imisebenzi kufanele kuphawulwe ukwehluka imiqondo yalo. Ngakho, ngaphansi kokuqondisa umshushisi kungaqondakala hhayi kuphela ubamba uhlobo oluthile lomsebenzi, kodwa futhi nodaba, kanye sphere esizimele isayensi zomthetho.
Okuqondiwe Lomshushisi umsebenzi wokuhlola zinqunywa yendima yayo ekuqhubeleni ubunjalo, indawo kanye nesimo. Ekugcineni, umgomo ebhalwe kuMthethosisekelo, uMthetho ehhovisi lomshushisi, neminye imithetho eklanyelwe Zilawula wegunya oshiwo ngenhla.
Ngakho, nezinhloso lomshushisi zihlanganisa:
Ukuqinisekisa yokudlondlobala kwezenhlalo nakwezombangazwe.
bemangalelwa ngamacala obugebengu.
Ukuqinisekisa ukudidiyelwa kokugcinwa komthetho ejensi ekulweni amacala.
Izinjongo kokuqondisa lomshushisi kukhona ngokucace kakhudlwana, ethize futhi kulinganiselwe uma ziqhathaniswa izinhloso zayo. Ngesikhathi esifanayo, bona baningi. imisebenzi asimeme ukungezwani okuphawulekayo zabo izindlela izixazululo, okuqukethwe, uhla emizimbeni (izinhlaka), ihhovisi lomshushisi, juqu futhi uyibeke. Evamile ihlukaniswe Izinjongo ekhethekile, jikelele kanye ethize.
Njengoba imisebenzi yayo yaqala prosecutorial ngcono. Ukuthuthukiswa Its kuhambisana nesimo ukwanda Lomshushisi njengoba isitho ephakathi ye ukubaluleka kahulumeni yokuqinisekisa zokuqapha kwamalungelo wobuntu, kanye abashushisi Vesting ezengeziwe amandla (amalungelo) badinga ngoba ukwenza imisebenzi yabo. Isici esibalulekile ngcono imisebenzi okukhulunywe ngawo ngaphambili kuyinto izenzo ngokuphelele elinemininingwane esikhundleni kwezikhulu prosecutorial.
Itshwayo izingalo Udmurtia. Incazelo yezimpawu weRiphabhulikhi nencazelo yawo
Travel Mahhala kwabahola impesheni esifundeni Moscow
Ukuvikelwa kwamalungelo omphakathi
Ukulayisensa indlela yamalayisense: umqondo, imisebenzi eyisisekelo kanye nemisebenzi. izenzo normative zomthetho kohlelo amalayisense
Kuyini sibili okumele imikhaya ehola kancane eRussia?
XPS: onjani format
Indlela ukupheka ushizi izinsana
Imithambo vertebral. vertebral Umthambo syndrome: izimpawu, uphethwe, ukuphathwa
Umthwebuli wezithombe ezivelele uNigel Barker: umsebenzi, impilo yomuntu siqu, usebenza
Spray "Terramamicin": izici zohlelo lokusebenza
Izidakamizwa 'Estrovel': yokusetshenziswa
Wedding isixha Bridal roses emshadweni ebusika